ikhaya IZINTLOKO ZEZIKHONDO I-Dennis Bergkamp Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leGosa lebhola leBhola eliyaziwa kakhulu ngeSiqheno; "U-Non-Flying Dutchman". Ibali lethu leDennis Bergkamp Ibali labantwana kunye ne-Untold Biography Facts ikuleta i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lokuzalwa kwakhe. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye ne-OFF kunye ne-ON-Pitch engaziwayo malunga naye.
Ewe, wonke umntu uyazi malunga nembali yakhe kunye neArsenal kodwa bambalwa bacinga i-Dography Bergkamp Biography enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, masiqale.
I-Dennis Bergkamp Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ubomi Bokuqala Nentsapho
UDennis Nicolaas Maria Bergkamp wazalelwa ngomhla we-10th kaMeyi 1969 e-Amsterdam, e-Netherlands. Wazalelwa kunina, uTonnie Bergkamp noyise, uWim Bergkamp (umbane wamandla). UBergkamp wayengowokugqibela oonyana abane baseWim noTonnie Bergkamp.
UDennis wakhuliswa kwinqanaba elisemsebenzini, kwintsapho efuna ukufikelela kwindawo ephakathi. Uyise, umbane kunye nomdlali webhola webhola ekhatywayo, wabizwa ngokuba ngumzukisi waseScotland uDenis Law echazwe ngezantsi.
Ukuthobela amasiko egama leDatshi, igama elongezelelweyo "n" lafakwa kwigama lokuqala likaBergkamp nguyise emva kokuba lingamkelwa ngumbhalisi.
I-Bergkamp ikhuliswe njenge YamaRoma Katolika yintsapho yakhe kwaye wayeya rhoqo ecaweni ebuntwaneni bakhe. Nangona kwiminyaka kamva wathi ukutyelela ecaweni akazange amkhange, uBergkamp usalondoloza ukholo lwakhe. Ngokutsho kukaBergkamp, ​​iqhawe lakhe lebhola le-football uG Glenn Hoddle, owayemthandayo ngenxa yokuthintela ngokuthe ngqo.
I-Dennis Bergkamp Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Umsebenzi kwiSishwankathelo
I-Bergkamp yenyuswa kwinkqubo ye-Ajax yolutsha, ijoyina iklabhu kwi-11 yobudala.
Wafunda ukusebenzisana kwintsimi kuba bekufuneka bafunde ukudlala yonke indawo. Ukudlala kwakhe ngokumncedisa kumnceda kamva xa enembileyo wayesazi ukuba ummeleli ochasayo uzama ukummisa njani. Lolo lwazi luya kumnceda ukuba amelane nantoni na ukukhusela kwakhe. Oko, ngokunxulumene nobuchule bakhe obungapheliyo, benze ukuba ngumntu onzima kakhulu ukuba alinde.
Kwixesha lexesha elizayo, iBergkamp yamisa njengomdlali wokuqala weqela le-Ajax. Oku kwagqitywa ngexesha lokuphumelela kwiqela, eliphumelele kwisihloko se-Eredivisie kwixesha le-1989-90 okokuqala ngethuba leminyaka emihlanu.
Wahlala kunye no-Ajax kwaze kwaba yi93, xa wagqiba kwelokuba wayefuna ukunyusa amaqela adlala nawo kunye. I-Italy kunye ne-Serie A beyiqhinga elinamandla kwaye emva kwexesha elithile emva nangaphandle, wakhetha i-Internazionale Milano ngaphezu kweJuventus. Kwakungelona nto ilungileyo kuba umshicileli waseNtaliyane wayengazi ukuba wenzeni ukuziphatha kwakhe kwangaphambili kwintsimi kwaye wambiza "Abangenamdla." Babengenabubele ngamanye amaxesha ngokumhlekisa.
Iminyaka emibili yokudlala ibhola e-Italy yabonakala iwanele eBerggamp kwaye waya e-Arsenal kwi-1995. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
I-Dennis Bergkamp Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
Ekuqaleni kwimiba yakhe, kwacaca ukuba yonke into enhle yeDan Bergkamp yeenyawo yayifuna umntu ofanelekileyo ukuba aphephe ukuzimisela kwakhe. Ubungqina bakhe bebhola buyayizaliswa yintombazana enhle kwaye enhle. Akukho enye imodeli yaseDutch, uHenrita Ruizendaal, uthando lobomi bakhe.
UBergkamp utshatile uHenrita Ruizendaal ukususela ngo-16 Juni 1993. Ngezantsi isitho somtshato wabo.
Esi sibini sinabantwana abane: Estelle Deborah, Mitchel Dennis, Yasmin Naomi no Saffron Rita. Ngezantsi nguDennis Bergkamp owokuqala kunye nonyana kuphela.
Unyana kaDennis Bergkamp ungumdlali onetalente ngokwakhe kodwa ubonakala ethatha indlela eyahlukileyo eya kumdlalo kunoyise, osayine neAjax eneminyaka eyi-12. UMitchel wagqiba ekubeni aqale umsebenzi wakhe kwinqanaba lebhola lebhola leDutch. Uphezu lokungena kwiinqwelo eziphezulu zebhola.
I-Dennis Bergkamp Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -UkuPhathwa kweStats
Silungiselele izibalo zobomi beBomiBogger zeDenis Bergkamp. Nceda khangela apha ngezantsi ukuba uhambelana noko ucinga ngako.
I-Dennis Bergkamp Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ulwaphulo
UDennis Bergkamp unempawu ezilandelayo kubuntu bakhe.
Amandla akhe: Unokwethenjelwa, isigulane, esisebenzayo, ozinikeleyo, onoxanduva kwaye ozinzile kwiintsapho zakhe.
Ubuthathaka bakhe: I-Aviophobia (ukwesaba ukuhamba ngeenqwelo-moya, iindiza kunye nezinye izithuthi ezindizayo)
Oko uDennis akuthandayo: Uyakuthanda Ukulima, ukupheka, umculo, uthando, iimpahla eziphezulu kunye nokusebenza ngezandla.
Yintoni uDennis ayithandayo: Akathandi ukungaqiniseki naluphi uhlobo,
Ngesishwankathelo, uDennis uyasebenza, kwaye umntu othanda ukuvuna iziqhamo zomsebenzi wakhe. Uvalelwa ukuba kufuneka ujikelezwe ngothando kunye nobuhle obuya kumnika intsapho yakhe kunye nabalandeli. UDennis unomzimba kwaye uyachukumisa kwaye uthatha umgca kunye nomnatha njengento ebaluleke kakhulu kwintliziyo yakhe. Ulungele ukunyamezela kwaye unamathele ekukhethweni kwakhe ade afinyelele kwinqanaba lokwanelisa.
Isiteketiso sikaBergkamp yiyona "U-Non-Flying Dutchman" ngenxa yokwesaba ukuhamba. Oku kubangelwe kwisiganeko kwiqela leSizwe laseNetherlands kwiNdebe yeHlabathi ye-1994 apho injini yendiza yachithwa ngexesha le-flight, ukunyathelisa intatheli ukuba ahlekise ngokubakho ibhogi yakhe. Ukulandela eli ganeko, uBerggamp wagqiba ekubeni akayi kuphinda aphinde aze aphinde acinge ngokufuna uncedo lwengqondo:
Ndine le ngxaki kwaye kufuneka ndiphile nayo. Andikwazi ukwenza nantoni na ngako, kuyinto engokwengqondo kwaye andinakuyichaza. Andizange ndihambe ngeenqwelwana iminyaka emibini. I-Dutch FA inesihawu, ngoko-ke yi-Arsenal, kude kube kude. Ndiqwalasela uncedo lwengqondo. Andikwazi ukuhamba. Ndiza kumisa nje. Ndiba nexhala.
Le meko iyanciphisa amandla akhe okudlala kwimidlalo emincinci kwimikhosi yaseYurophu kunye nokuhamba neqela lesizwe. Kwezinye iimeko, wayeya kuhamba ngeemoto okanye isitimela, kodwa ukusetyenziswa kweminye imifino yayinexinzelelo oluninzi kuyo ukuba akayi kuhamba.
I-Dennis Bergkamp Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Post Retreat
Wabeka umhlala-phantsi kwi-2006 waza wanyulwa kwiHlabathi yeBhola yeFlabathi yeFame ngonyaka ozayo. Kwakuyimbeko ephakamileyo kakhulu kuba wayengumdlali wokuqala waseDutch ukuba avotelwe kuyo. I-FIFA imbeke phakathi kwabadlali abaphezulu be-100 kuwo onke amaxesha kwaye u-Arsenal wabeka i-No. 2 phakathi kwamakhulu abadlali abaye bafaka ijezi yabo.
Emva kokuthatha umhlalaphantsi, uBergkamp wagxininisa ukuba akayi kuhamba kwi-coaching. Waguqula isipho sokukhangela iArsenal kwaye esikhundleni sakhe wagxininisa ekuhambeni kunye nokuchitha ixesha kunye nosapho lwakhe.
Nangona kunjalo, ngo-Ephreli 2008, waqala idiploma yokuqeqesha ngokukhawuleza yabadlali bebhola bebhola kumazwe ngamazwe aseDutch waza waqalisa inxaxheba kumqeqeshi we-Ajax. Emva kokugqiba iCaach Betaald Voetbal kunye nokuthatha iindawo ezininzi zokuqeqesha, uBergkamp wabizwa ngokuba ngumncedisi kaDeer ku-Ajax ngo-Agasti 2011.
QHUBEKA: Siyabulela ukufunda iDennis Bergkamp yabantwana bebali kunye ne-Untold Biography. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke izimvo zakho Qhagamshelana nathi!.
Ijaji yebhola leAjax
I-Quincy Promes Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
vannyhenrico - Matshi 29, 2020
Matshi 21, 2020
vannyhenrico - Matshi 29, 2020 0
vannyhenrico - Matshi 25, 2020 0
Iindaba zeMatthijs de Ligt yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Disemba 16, 2018
Ivan Perisic Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts
Julayi 4, 2018